XOG: Maxay qaban doonaan Guddiyada farsamo ee loo saaray arrinta Doorashooyinka, maxaase lagula balamay?
July 23, 2020 NEWS 2
MUQDISHO(P-TIMES) – Guddiga Farsamo ee ay madaxda dawladda Faderaalka Soomaaliya & Dawlad gobaleedyadu ku heshiiyeen in ay la sameeyo guddi Farsamo, kaas oo ka shaqeyn doona sidii uu fududeyn lahaa nooca doorasho ee kadhacaysa Soomaaliya, marka la gaaro waqtiga dawladda Faderalka oo ay hadda bilo kooban naga xigaan, qodobkaas oo ay aad iskugu fahmi waayeen madaxda maalmihii lasoo dhaafay ku shirsaneyd magalada DhuusaMareeb.
Guddigan farsamo, waxay ka kooban yihiin in ka badan 10 xubnood oo katirsan oo ah wasiiradda dawlad gobaleedyada, Xaafiiska Madaxweynaha & golaha wasiiradda dawladda Faderaalka Soomaaliya, waana mid kamid ah waxyaabaha ay guddigan lagu soo xulay oo caqabaduhu ka imaan doonan.
Shaqada guddiga oo laga bilaabayo magaalada Dhuusa-Marreeb waxaa hareyn doona kala aragti duwananshaha madaxda dhinacyada, iyadoo ay adkaan doonto in ay si wadajir ah go`aan rasmi ah uga gaaraan arrimaha doorashooyinka ku saabsan.
10 cisho gudahood ayaa lafilayaa in ay qaataan go`aan wadajir ah oo ay ku cadeynayaan nooca doorasho, kaas oo ay u gudbinayaan Madaxda sare ee dawladda Faderalka & Maamul gobaleedyada, laakiin in ay 10-ka maalmood ku gaaraan qaraar rasmi ah waa arrin adag oo aysan si fudud u fuli Karin waqtigan.
Ka hor 10-ka August waxaa laga sugayaa guddiga in ay diyaar yihiin ugu yaraan 3 nooc doorasho oo dhammantood ka duwan kuwii horey dalka uga dhacay, una dhaw sidii shacabku ay u yeelan lahaayeen doorashada xildhibaanada, waana arrin adag in bilo yar gudaheed ay dhacdo nooc doorasho oo aan aragti hore laga heysanin.
Horta waxaa bogaadin leh in Soomaalidu ay magaalooyinkooda kuwada hadlayaan, ilaahbaa TIGREEGII naga qabtay!
Waxaanan iikala caddayn in guddigan farsamada lagu sheegay ay xubno ku leeyihiin guddigga doorashooyinka madaxa bannaan. Ma shaqadii guddiga madaxabanaan ee doorashooyinka bay la wareegeen? Yaasiiyey awoodda ay kula wareegeen? Dawlada dhexe iyo dawladaha hoose awood ma u leeyihiin in ay guddi kale ka kor dhisaan guddigii 6da sano dhisnaa?
Anigu waxa aan u arkaa in sheekada meesha ka soo baxday ee ku saabsan doorashooyinka aysan macquul ahayn. Waxaa dhici doonta waar yaa mar uun harageedii inagaga celiya, oo arrinka dib loogu celiyo meeshii laga soo cayn wareejiyay ee ahayd warbixintii waafiga ahayd ee Xaliimo ka hor jeedisay golaha baarlamaanka.
Waxa atooreyaashii ku heshiinwaayeen miyaa guddi-hoosaad ku heshiinayaa?
Waxaan la yaabbanahay sida mar kale dowlad goboleedyadu u aqbaleen xeeladaha waqti lumiska ee Farmaajo iyo Fahad Yaasiin? Mise wax qarsoon baa jira?
Ninkii sidii wax kale looga sugayey sheegay inuu talo ugu noqon doono baarlamaan ku-sheegga, balse cidda uu talada ugu noqonayaa tahay Fahad Yaasiin, Cali-daacuun, Maxamed Cabdi Yuusuf, ‘Ugaas’ Maxamed-wali, Cali Geeddi, C/Raxmaan-guulwade, iyo Abiy Ahmed, miyaa laga sugayaa inuu soo diro guddi oggol xeerjajab iyo tanaasul?
Dadka reer Galmudug kharashkii iyo xoolihii uga baxay martigalinta, miiska Aakhiro Alle ha ugu daro.